Top 5 Free Watermark Software na Tinye Watermarks Gị Photos
Ị chọrọ tinye watermarks gị photos iji chebe gị ihe oyiyi si misused ma ọ bụ depụtaghachiri? Photo watermark software pụrụ inyere gị aka tinye ahaziri ederede ma ọ bụ oyiyi watermarks gị photos iji chebe gị nwebisiinka. E nwere ụfọdụ oké free watermark software na isiokwu a depụtara ndị kasị mma 5 free foto watermark software ịgbakwunye ihe na ihe oyiyi na-foto gị.
TSR Watermark Image software bụ free watermark software ịgbakwunye ederede, foto ma ọ bụ logo watermarks foto na ogbe na ala ngwa ngwa. The watermark ịke, ndabere na nghọta larịị na agba nwere ike gbanwee kpamkpam. Ọ na-arụ ọrụ Windows XP, Windows nkesa 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, na Windows 7 - na NET kpuchie 2.0 ma ọ bụ karịa.
Alamoon Watermark bụ ike free watermarking software nke na-enyere gị aka tinye watermarks foto na ogbe na sekọnd. Isi foto formats na-ọma na-akwado. Na ya, i nwere ike tinye ederede, logo, ma ọ bụ URL gị oyiyi dị ka ị na-amasị iji chebe gị nwebisiinka.
PicMarkr bụ ihe ọzọ bara uru oké free foto Ịhazi ngwá ọrụ iji tinye watermark gị dijitalụ photos. Ọ na-ahapụ gị kpam kpam tinye oyiyi ma ọ bụ ederede watermarks gị foto online. Ị nwekwara ike iji ya mbubata foto gị Flickr, Picasa, Facebook, wdg na bulite foto site na kọmputa gị. Mgbe ị okokụre agbakwunye watermarks, ị nwere ike ozugbo bulite na ịkọrọ gị ihe oyiyi na-Flickr ma ọ bụ ibudata online photos gị na kọmputa. Photo resizing bụ dịnụ.
Free Software 4. Mark watermark Lite
uMark Lite bụ a free image watermarking software ịgbakwunye customizable ederede ma ọ bụ logo watermarks gị dijitalụ photos. Ọ na-akwado BMP, jpg, GIF, PNG na TIFF. Ogbe watermark agbakwunye dị, ma ọ bụghị ihe karịrị 50 photos na oge. uMark Lite bụ a freeware na ụfọdụ ọrụ na-adịchaghị. uMark Pro bụ elu version nke uMark Lite na ọtụtụ ihe ndị ọzọ atụmatụ, ma ị ga-akwụ maka ya.
waterMark v2 bụ ihe dị mfe na-eji watermaking ngwa ịgbakwunye image watermarks gị photos. Dị nnọọ kọwaa ihe oyiyi dị ka watermark na-edebe ya n'ebe ọ bụla ị chọrọ na foto ịchọrọ ịgbakwunye. Nghọta nke watermark image nwere ike gbanwee kpamkpam. Ogbe ime dị na-akwado image formats bụ BMP, JPEG, PNG na TIFF.
Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ị nwere nza nke photos, ị pụrụ ime ka a foto DVD ngosi mmịfe ka mma chebe na ịkọrọ gị foto echeta na a ngosi mmịfe software.